XOG: Maalintee la saxiixayaa heshiiska iibka AC Milan – Gool FM
XOG: Maalintee la saxiixayaa heshiiska iibka AC Milan
Raage May 29, 2016
(Milano) 29 Maajo 2016 – Sida uu qorayo China Daily, Silvio Berlusconi wuxuu baaqi kusii ahaanayaa madaxwaynenimada AC Milan, balse iibinta 70 boqolkiiba ayaa soo afjarmeeysa Juunyo 15-20.
Wada xaajoodyada ayaa si aan kala go’ lahayn ku soconayey dhowr todobaad iyadoo ay haatan dallada Chinese-ku baaritaan ku heeyso koonto xisaabeedyada Milan.
China Daily ayaa sheegaya in qof ku dhow dhow wada xaajoodyada uu u sheegay in la saxiixi doono heshiis lagu iibsanayo 70 boqolkiiba, iyadoo ay heshiiska ka mid tahay inuu Berlusconi sii ahaado madaxwaynaha naadiga 2-3 sano oo kale, tan iyo inta ay sharikaddu wada iibsaneeyso 30 boqolkiiba harsan.
“Haddii ay wax kastaahi sida la doonayo ku dhamaadaan heshiis kama dambeeyn ah ayaa waxaa la gaari doonaa Juun 20-15. Waxaa haatan harsan in Berlusconi ogaado cidda ay tahay ragga iibsanaya kooxdiisa,”ayuu yiri qofkaasi.
Walooow aanu sicirku weli caddeeyn waxaa la fahamsan yahay in qiimaha guud ee AC Milan lagu qiyaasay €700-740m oo euro.
Xubnaha iibsanaya ee dallada ku jira ayaa waxaa la sheegayaa inuu ku jiro Jack Ma, oo ah ninka ugu taajirsan China ee aasaasay Alibaba Group.
Ronald Koeman oo aan la dhicin qaabkii Man United ay ku cayrisay tababare Van Gaal
GOOGOOSKA: Portugal vs Norway 3-0